Boqortooyada Sacuudiga oo isku furaysa furin kale oo dagaal, gudaha Yemen.
RIYAD(P-TIMES)- Wasaaradda Arrimaha dibada ee dalka Sacuudiga Careebiya ayaa xalay ku dhawaaqday in aysan aqoonsaneyn Jabhada hubeysan ee ay taageerayso dawladda Imaaraatka Carabta ee qabsatay taladii magaalada Cadan ee dalka Yemen, isla markaasna meesha ka saartay dawladdii sharciga ahayd.
Jabhaddan waxay doonaysaa in ay ka go’aan Waqooyiga Yemen iyo magaalada Sanca, ayna Cadan doonayaan in ay ka dhigaan dawlad ka madax banaan Yementa kale, maadaama ay horey labadan dalba u midoobeen 1990-kii.
Sacuudiga ayaa sheegtay in ficilada la qaaday ay yihiin kuwa ka soo horjeeda dawladnimada dalka Yemen, ayna doonayaan in si deg deg ah miiska wada xaajoodyada ay ugu soo laabtaan dhinacyadaas.
Falaagada qabsatay Cadan ayaa si adag dhankooda u arkay warka Sacuudiga, waxayna shegeen in ay Xukuumadda Riyadh ku fashilantay arrimaha gudaha ee dalka Yemen, aysana marnab aqbaleyn hanajabaad loo soo jeediyo.
Sacuudigu, waxay kaloo cadeysay in ay talaabo adag ka qaadi doonto kooxaha qabsaday xarumihii dawladda Yemen, haddii aysan sida ugu dhaqsaha badan u baneyn una soo dhaweyn xubnihii dawladda ee halkaas kusugnaa.
Madaxweynaha dibad jooga ah ee Yemen CabdiHadi Mansur ayaa dhacdadan ku sifeeyey mid ay ka shaqeynayaan wadamada khaliijka, isagoo sheegay in dhibaatada ka dhalatay dagaalkii Yemen lagu qaaday ay noqotay in shacabkii gudaha la kala qeybiyo.
Dawladda Imaaraatka Carabta ayaa ciidamadooda iyo hubka culusba ku taageeray kooxaha Falaagada cusub ee qabsatay xarumihii dawladda ee magaalada Cadan, wasiirka Arrimaha gudaha ee Yemen ayaa ugu hambalyeyey talaabadan ay qaaday Imaaraatka Carabtu.